झाँक्रीको गिरफ्तारी ‘१९ माघ’ को प्रारम्भिक संकेत
रामकुमारी झाँक्रीको गिरफ्तारी ‘माघ १९’ को प्रारम्भिक संकेत हो ।
नागरिक आवाज दबाउन उद्यत सरकारले हालै सामाजिक सञ्जालमा अंकुश लगाउने निर्देशिका ल्याउने तयारी गर्नु र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको चीरहरण हुने गरी रामकुमारी समातिनुको पछाडिको नियत प्रष्टै छ- सरकारको गैरसंवैधानिक कदमको विरोध गर्ने र सरकारप्रति आक्रोश पोख्ने कसैलाई छोडिन्न ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र समानताको हकमा सरकारले कस्तो गिद्दे दृष्टि लगाएको छ भने महिलालाई विदेश जान वडाको सिफारिस अनिवार्य गर्ने संविधानमा उल्लिखित स्वतन्त्रता र समानतालगायत नागरिकका मौलिक हकसम्बन्धी प्रावधान र मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको प्रतिकूल हुने गरी महिलामाथि हुन लागेको विभेदकारी व्यवस्थालाई हेरे पुग्छ ।
रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गरेर सत्ताले नेपाली जनताको नाडी छाम्ने काम गरेको छ । विपक्षी दल र नागरिक समाजले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भने आउने दिनमा विध्वंस मच्चाएर देशमा संकटकाल लगाउन र आफू चुनावको पक्षमा हुँदाहुँदै पनि चुनाव गर्न नदिएको भाष्य निर्माण गर्न अरू अनेकौँ प्रयोग हुनेछन् । जब सत्ता जनताको नाडी छाम्न आइपुग्छ, त्यति बेला के बुझ्नुपर्छ भने खासमा ऊ जनताको घाँटी समाउन चाहन्छ र त्यसको निशानामा पर्नेछन्- नागरिक अधिकारकर्मी, मानवअधिकारको वकालत गर्ने, जनप्रतिनिधि र मिडिया । मिडियाको घाँटी थिच्नुअगाडि गगन थापालाई समाएर राजाले पनि जनताको नाडी छामेका थिए ।
सारमा रामकुमारी झाँक्रीलाई राष्ट्रपतिको मानमर्दन गरेको आरोपमा पक्राउ गरिए पनि त्यो देखाउने कारण मात्र हो । खास कारण हो, झाँक्रीले ओलीलाई दिएको चुनौती । प्रहरीले झाँक्रीलाई दिएको पक्राउ पुर्जीमा चरित्रहत्या नभएर राज्यविरुद्धको कसुर लगाइएको छ ।
लोकतन्त्र र सार्वभौमसत्ताका पक्षमा हुने संघर्ष शाही सरकारलाई राजद्रोहजस्तो लाग्छ भने त्यस्तो ‘राजद्रोह’का लागि म मन, वचन र कर्मले समर्पित छु । आज बन्दुकका बलमा हामीलाई अभियुक्त बनाएर कठघरामा उभ्याउन खोज्नेहरूले छिट्टै आफैँ अभियुक्त बनेर इतिहासको कठघरामा उभिनुपर्नेछ ।
गत बुधबार प्रचण्ड-माधव पक्षले काठमाडौंमा आयोजना गरेको विरोधसभामा झाँक्रीले संविधानको चीरहरण गर्ने र सर्वसत्तावादविरुद्ध बोल्न पाइने भन्दै ओलीलाई कागजका बादशाह भएको र उनको सत्ता ढलिसकेको, औपचारिक घोषणा हुन मात्र बाँकी रहेको बताएकी थिइन् ।
ओलीलाई प्रस्टै थाहा छ- अहिले चुनाव हुने स्थिति छैन र कदाचित भयो भने त्यो राजाको शासनकालमा भएको चुनावजस्तो हुनेछ । तसर्थ ओली हुनै नसक्ने निर्वाचनको पैरवी गरेर एकातर्फ आफू सच्चा लोकतन्त्रवादी भएको, लोकतन्त्रमा चुनाव अनिवार्य भएको तर आफूले चुनाव गर्न चाहँदाचाहँदै पनि देशमा चुनाव हुन नदिइएकाले आफूले बाध्य भएर संकटकाल लगाउनुपरेको भन्ने वातावरण जबर्जस्ती तयार गर्दै छन् भने अर्कोतर्फ उनका हालैका अभिव्यक्ति हेर्दा र उनले हरेक भाषणमा बोल्ने कुरालाई नियाल्दा पनि के देखिन्छ भने उनमा बदला र ‘देखाइदिने’ भावना प्रबल छ ।
बदलाको भाव भयंकर रूपमा जागेको छ । भारतमा इन्दिरा गान्धीको शक्तिसंघर्ष र गान्धीको कदमसँग ओली चिरपरिचित देखिन्छन् । आगामी दिनमा ओली सम्भवतः गान्धीपथमा जाने तयारी गर्दै छन् । सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगबाट आफू प्रतिकूल निर्णय भएमा संकटकालको रातो कार्ड देखाउन आवश्यक तयारीमा ओली र उनका कथित् सल्लाहकार लागेको कसैबाट छिपेको छैन ।
सरकारबाहिर हुने दलले जनप्रदर्शन गर्नु स्वाभाविकै हो, तर मरिचमान सिंहपछि ओली मात्र यस्ता प्रधानमन्त्री हुन्, जो आफू सरकारमा रहेर पनि आफैँले भीड जम्मा पारेर शक्ति प्रदर्शन गर्दै दल, मिडिया र नागरिक समाजप्रति धारे हात लगाउँदै छन् । ओलीलाई के हेक्का रहोस् भने मरिचमान सिंहले दशरथ रंगशालाबाट आफैँ अगुवाइ गरेर निकालेको जुलुसमा सहभागी मानिसले त्रिपुरेश्वरबाट अलिक अगाडि पुग्दा नपुग्दै बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा र पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध नारा लगाउन सुरु गरिसकेका थिए ।
झाँक्रीलाई पक्राउ गर्न झन्डै ३ सय प्रहरी परिचालन गरेर 'बाहुबली' देखाएको सरकारले सत्ताको तागतमार्फत आलोचना र टिप्पणी नसहने प्रस्ट सन्देश दिएको छ । चर्चित भारतीय पत्रकार रविसकुमारले सन् २०१७ मै भनेका थिए, 'जब मुलुकमा संकटकाल छैन भनेर कसैले भन्छ भने मेरो एउटै उत्तर हुने गर्छ- सत्ताको आतंक र बर्बरताको अन्तिम मापक संकटकाल मात्र होइन । डराउन दिने अरू पनि सयौँ तरिका छन्, जुन संकटकालमा थिएनन् ।'
सत्ताले सबैलाई डराउन दिँदैन, उनीहरूलाई मात्र डराउन दिन्छ । जोसँग सत्तालाई डर लाग्छ, तिनै मानिसको वरपर एउटा यस्तो वातावरण निर्माण गरिन्छ, जसले डरको सिर्जना गरोस् । यो त्यही वातावरण हो, जहाँबाट सत्ताले तपाईंलाई डराउन दिइरहन्छ । अर्थात् 'डरको कुनै दस्तावेज हुँदैन, डरको वातावरण हुन्छ' ।
राजाले १९ माघको कदम चालेपछि १० साउनमा नागरिक समाजले गरेको विरोधसभामा राजतन्त्रविरोधी नारा लगाएको आरोपमा गगन थापा पक्राउ परे । अदालतमा बयान दिने क्रममा थापाले भनेका थिए- पूर्ण लोकतन्त्रप्रतिको मेरो निष्ठा राजद्रोह हो भने त्यस्तो ‘राजद्रोह’ म जीवनभरि नै गरिरहनेछु । लोकतन्त्र र सार्वभौमसत्ताका पक्षमा हुने संघर्ष शाही सरकारलाई राजद्रोहजस्तो लाग्छ भने त्यस्तो ‘राजद्रोह’का लागि म मन, वचन र कर्मले समर्पित छु । आज बन्दुकका बलमा हामीलाई अभियुक्त बनाएर कठघरामा उभ्याउन खोज्नेहरूले छिट्टै आफैँ अभियुक्त बनेर इतिहासको कठघरामा उभिनुपर्नेछ ।
सार्वभौमसत्ता जनताले मात्र यो देशको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्न सक्छन् । सत्ताको मातमा अन्धो बनेका ओलीले जति चाँडो यो तथ्य बुझ्छन्, त्यसैले तय गर्नेछ- ओली बालुवाटारबाट नारा लगाउँदै सिंहदरबार जान्छन् कि बालकोट !
नेपाली कांग्रेस अहिले फड्के किनाराको साक्षीजस्तो देखिएको छ । लोकतन्त्रको यो लडाइँलाई नेतृत्व गर्नुपर्ने कांग्रेस नेकपाका दुई समूहको लडाइँको साक्षी बनेको छ । करिब ७५ वर्षपहिले स्थापना भएको नेपाली कांग्रेस नेपाली राजनीतिक सात दशकका सबै परिवर्तनको एउटा बलियो शक्ति र साक्षी हो । तर, लोकतन्त्रको यो लडाइँमा कांग्रेसको मौनता अचम्मलाग्दो छ । इतिहासमा राजाले शेरबहादुर देउवालाई चुनाव घोषणा गर्नुस्, दरबारले सहयोग गर्नेछ भन्ने आश्वासन दिएपछि आफ्नै पार्टीको निर्देशनविपरीत प्रतिनिधिसभा भंग गरेका देउवालाई कांग्रेसले साधारण सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो र कांग्रेस विभाजन भयो ।
कांग्रेसको चुनाव चिह्न रूखका लागि निर्वाचन आयोगमा मुद्दा पर्‍यो । उक्त चुनाव चिह्न देउवा सभापति रहेको कांग्रेसलाई दिन नत्र ‘फ्रिज’ गर्न निर्वाचन आयोगलाई तत्कालीन महाराजधिराजबाट हुकुम बक्सेको थियो । तर, देउवाले नेतृत्व गरेको पार्टीले रूख चिह्न पाएन, न त त्यो चुनाव चिह्न फ्रिज नै हुन सक्यो ।त्यतिबेला देउवाले बारम्बार भन्ने गर्थे, 'मैले राजाबाट धोका पाएँ ।' हाल पनि कांग्रेस र उसका सभापति शेरबहादुर देउवाको मौनता देखेर लाग्छ- शेरबहादुरले ओलीबाट त्यस्तो के आश्वासन पाएका छन् ? यो मौनता फेरि 'मैले ओलीबाट धोका पाएँ' सम्म नपुगोस् ।
७० वर्ष लडेर पनि हामीले व्यक्ति परिवर्तन मात्र गर्‍यौँ, शासनको चरित्र परिवर्तन गर्न सकेनौँ । सार्वभौम नेपाली जनता सत्ताको त्यो चरित्र फेर्ने लडाइँमा होमिइसकेका छन् । ओलीले हालका दिनमा बिर्सिएको एउटा सत्य के हो भने नेपालको संविधानले भन्छ- नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ । तिनै सार्वभौमसत्ता जनताले मात्र यो देशको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्न सक्छन् । सत्ताको मातमा दृष्टि गुमाएका ओलीले जति चाँडो यो तथ्य बुझ्छन्, त्यसैले तय गर्नेछ- ओली बालुवाटारबाट नारा लगाउँदै सिंहदरबार जान्छन् कि बालकोट !
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ३०, २०७७, १३:२७:००